Luis Enrique Oo Qaaday Tallaabo Uu Ku Noqonayo Tababaraha Barcelona
HomeSuuqaLuis Enrique Oo Qaaday Tallaabo Uu Ku Noqonayo Tababaraha Barcelona
Macallinka layliya kooxda Celta Vigo, Luis Enrique ayaa qaaday tallaabo uu isugu diyaarinayo in uu tababre ugu noqdo kooxda Barcelona, kadib markii uu shaaciyey inuu iska casilay shaqada kooxda uu hadda tababaro ee Celta Vigo.
44 jirkan ayaa wada hadallo kula yeeshay Barcelona gurigiisa horraantii bishan, waxaanay isla qaateen in uu tababare ka noqdo Barcelona oo uu beddelo Gerardo Martino, isla markaana uu kooxda hoggaamiyo xili-ciyaareedka 2014-2015.
Luis Enrique ayaa u soo ciyaaray Barcelona intii u dhaxaysay 1996-2004, walina xidhiidh dhow ayuu la leeyahay kooxda, inkasta oo uu diiday inuu xaqiijiyo ama dafiro inuu ku noqonayo Camp Nou mar Jimcihii la waraystay.
“Maanta waa maalin murugo. Maanta waxaan ahay tababara Celta waanan sii ahaanayaa illaa dhamaadka xili-ciyaareedka. Waxaa waajib igu ah inaan u sheego qorshahayga, si ay u helaan wakhti ay ugu diyaar garoobaan.
“Ma aha sabab aniga ii gaar ah, laakiin reerkaygii ayaan kaga imi Barcelona waxaanay ahayd arrin adag”. Ayuu yidhi.
Enrique waxa uu sheegay in aanu qorshihiisa mustaqbalka hadda shaacin doonin, laakiin marka wakhtigeeda la gaadho uu bannaanka soo dhigi doono.
Luis Enrique, oo shan sannadood u ciyaaray Real Madrid ka hor intii aanu ku biirin Barcelona, ayaan waligii qarinin xidhiidhka dhow ee uu la yeehayay kooxda reer Catalan, waxaanu mar noqday tababaraha kooxda heerka labaad ee Barcelona, shaqadaas oo uu hayay muddo saddex sannadood ah oo ah intii u dhaxaysay 2008-2011. Kadib waxa uu ku biiray Roma oo uu ka noqday tababare oo uu hal xili-ciyaareed oo kaliya la qaatay, kadib sannadkii hore ayuu la wareegay Celta Vigo oo uu haddana iska casilay.
Wakhtigii uu xanuunsanayay Tito Vilanova ayaa si weyn loola xidhiidhiyey in uu beddel u noqonayo, laakiin taasi ma ay suurtogelin waxaana kaalintaas qaatay Gerardo Martino oo isaguna in ka yar sannad kooxdaas layliyay, isla markaana toddobaadkan la filayo inuu shaaciyo in shaqada Barcelona uu ka tegayo.
Markii Luis Enrique uu gurigiisa kula kulmay masuuliyiin ka socota Barcelona, isagoo ah tababaraha Celta Vigo, isla markaana uu Barcelona macallin u yahay Martino, ayaa waxa ay taasi abuurtay khilaaf, laakiin madaxweynaha kooxda Celta Vigo, Carlos Mourinho ayaa Jimcihii shaaciyey in Luis uu fasax u yahay inuu la xaajoodo kooxda reer Catalan.
“Luis Enrique fasax ayuu u haystay inuu tago Barcelona maalintaas oo uu la kulmo ciddii uu doonaba” ayuu yidhi Carlos Mourinho.
Si kastaba ha ahaatee, tababaraha wakhtigan ee Barcelona ayaa si weyn looga biyo diiday qaab-ciyaareedka uu kooxdaas ku hoggaamiyey sannadkan, waxaana beddelkiisa loo arkaa inuu noqonayo Enrique.
Bayer Leverkusen Oo Shaqada Ka Eriday Tababare Sami Hyypia
05/04/2014 Abdiwahab Ahmed
Alfredo Di Stefano Oo Geeriyooday
Garcia: Roma Wali Waxay Awoodaa Inay Juventus Horyaalka Kula Loolanto